Amajoni ama-4 ase-US, ama-Afghani angama-60 abulawa ekuhlaselweni kwesikhumulo sezindiza saseKabul
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » Amajoni ama-4 ase-US, ama-Afghani angama-60 abulawa ekuhlaselweni kwesikhumulo sezindiza saseKabul
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
UKUHLAZIYA: I-US Marines yokufa kwabantu ngoku kwi-12
Amanyano amaninzi e-US ebesele eyigqibile imizamo yokufuduka ngaphambi koqhushumbo lwangoLwesine, ecaphula kwangaphambili ubukrelekrele malunga nohlaselo lwabanqolobi, okanye babhengeza uLwesine njengethuba lokugqibela lokuphuma.
Amajoni aseMelika abulawa kwibhombu yaseKabul.
Uninzi lwabantu base-Afghanistan bafa kuqhushumbo lwesikhululo seenqwelomoya saseKabul.
Uninzi lwamahlakani aseMelika sele luphelile ukukhutshwa eKabul.
Amajoni amane aseMelika kunye nama-Afghans angama-60 babulawa kuhlaselo lwangoLwesine kwisikhululo senqwelomoya saseKabul Hamid Karzai.
Ngokweengxelo zamva nje, umthunywa wase-US eKabul uxelele abasebenzi bommeli apho ukuba amaMarine aseMelika abulawa kwaye abathathu balimala Ukuhlaselwa kwesikhululo senqwelomoya. Kwangelo xesha elinye igosa lezempilo lase-Afghanistan lathi inani lokufa kwabantu basekuhlaleni ubuncinci belingama-60, uninzi lwabo lusilwela ubomi babo.
Isebe lezoKhuseleko laseMerika uqinisekise ngokusesikweni ukuba amajoni aliqela aseMelika ebephakathi kwabo babulewe kuhlaselo lwangoLwesine kwisikhululo senqwelomoya saseKabul kwingxelo ekhutshwe ngunobhala weendaba u-John Kirby.
Iarhente khange ichaze inani labantu abaswelekileyo, esongeza ukuba uninzi lwabantu baseMelika benzakele.
Abonzakeleyo babangelwe "luhlaselo oluntsonkothileyo" olwabulala nenani labemi baseAfghan, ngokwePentagon. Iziqhushumbisi - ekukholelwa ukuba zibangelwe yibhombu enye yokuzibulala e-Abbey Gate nakwibhombu enye yezithuthi kufutshane neBaron Hotel - ishiye abantu abali-13 bebhubhile, isithethi seTaliban siqinisekisile.
IDenmark neKhanada azisekho kwimishini yokufuduka; IPoland neNetherlands ziyeke ukubhabha okokoko kuhlasela, ngelixa i-Itali ime ngooLwesine ebusuku, kwaye iFrance ibhengeze umhla wokugqibela wangoLwesihlanu. I-UK ne-US, nangona kunjalo, bayaqhubeka ngenqwelomoya njengoko amawaka azama ukufumba inani elincipha ngokukhawuleza kweenqwelomoya ezikhoyo.